Archive du 20180214
Marc Ravalomanana “Mifanatona amin’ny rehetra aho”
Tontosa teny amin’ny Hotely Carlton Anosy omaly rtalata 13 febroary ny fifampiarahabana nahatratra ny taona eo amin’ny antoko politika maro samy manana ny hetahetany momba ny fifidianana ho avy, anisan’ny nanatrika tao i Marc Ravalomanana. Fifidianana mirindra sy milamina hahafahan’ny besinimaro mandray anjara no andrandraina, raha ny fanehoan-keviny.
Ravalomanana Marc sy ny iraisam-pirenena Mandeha foana ny fifampiresahana
Tsy hanao fialantsasatra akory ny fiverenan`Atoa Ravalomanana Marc an-tanindrazana fa hiverina eo amin`ny fitondrana. Efa maro ireo firenena notsidihany ary tanjona amin`izany ny hamerenana ny fampitokisana eo amin’ny mpamatsy vola sy hanamafy ny fifandraisana iraisam-pirenena.
Fandrobana sy vono olona Miparitaka ny dosie momba an-dRajoelina
Vao nigadona an-tanindrazana ny filohan`ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, ny alahady lasa teo dia manomboka mivoaka indray ny dosie resaka famatsiam-bolan’ny fandrobana lehibe ny 26 janoary 2009 sy ny fitifirana teny Ambohitsorohitra ny 7 febroary 2009 eny amin`ny tambajotra sosialy eny.
KMMR 2018 Vonona tanteraka hampandresy an-dRavalo
Komity goavana hivondronan’ny olom-pirenena tsy an-kanavaka hanohana sy hampandresy an’i Marc Ravalomanana ny KMMR 2018 na ny “Komity Mpanohana an'i Marc Ravalomanana 2018 ».
Fisandratana 2030 Tsy mazava amin’ny Malagasy
Maro ny Malagasy no tsy mahazo akory ny vontoatiny sy ny dikan’ilay vina Fisandratana 2030 nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny 25 janoary 2018 lasa teo.
Vondron’olon-tsotra “ Tsy mahazaka ny fitiavan’ny olona an’i Neny sy Dada ny fanjakana”
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny Vondron’olon-tsotra manoloana ny antsojay ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana. Nambaran-dRtoa Sarah Zoe, filoha nasionalin’ny VOT fa ny fitiavan’ny Malagasy an’i Neny sy Dada mihitsy no tsy zakan’izao fitondrana mijoro izao, hany ka mitady hirika hamotehana ny kaominina hatrany izy ireo.
Aza be resaka nama a !
Ahoana Jean a ! Mety ve ny fisintahana faobe arahana hanimpitoloha ao e ? Hitako metimety daholo kosa aloha ianareo a ! Dia tena mety mihitsy ny atao e ! Fotoana izao mba handinihanareo tena a !
Minisitry ny vola Mbola salama saina tsara ihany ve ?
Maro ireo mpanara-baovao taitra sy nitsamboatra mihitsy omaly hariva rehefa nijery vaovao tamin’ny fahitalavitra ka nandre ny tenin’ny minisitry ny vola Ramatoa Andriambololona Vonintsalama Sehenosoa.
Razana hita eny rehetra eny Ny fokontany sy ny kaominina no tompon’andraikitra voalohany
Tranga iray niteraka resabe teny anivon’ny fiarahamonina ny alatsinainy teo ny fisian’ireo razana efatra indray hita teny amin’ny ranon’Ikopa.
Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana Mijoro hiady amin’ny tsy fahamarinana
Nangina nandritra ny 8 taona ka indro nifoha tamin`ny torimasony ny HMF (Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana) manoloana ny fijalian’ny vahoaka Malagasy Mpiray tanindrazana. Kihon-dalana lehibe ho azy ireo ny vanim-potoana ankehitriny satria maro ny endri-javatra efa manaporofo ny asan’ny « tsy marina » sy izay rehetra mpomba azy ankehitriny.
Doda Andriamiasasoa “Manam-bola tsara ny FMF”
Miroso hatrany isika amin’ny fampandrosoana ny baolina kitra Malagasy, hoy ny filohan’ny FMF am-perinasa Doda Andriamiasasoa, tafaresaka tamin’ny mpanao gazety teny Carion tamin’ny faran’iny herinandro lasa iny.
Champions League – 1/8n-dalana Nofaizin’i Manchester City ny Fc Bale
Nanomboka omaly talata ny 1/8 n-dalana lalao mandroso amin’ny champions league any Eoropa, tsy niady ny baolina teo amin’i Manchester City sy ny Fc Bale, nisongadina tsy nisy adihevitra i Manchester nandresy mazava tamin’ny 4-0.
Tsy misy hevitra intsony
Ohatry ny fomba fiasa rehetra io ! Mihinam-bary aza misy latsaka, hoy ny minisitry ny vola sy ny tetibola manoloana ilay raharaha fivoahan’ny sora-bola midangana be momba ny tsenam-panjakana nivoaka tamin’ny tranonkalan’ny sampandraharaha misahana izany.
Fahapotehan’ny Air Madagascar Vokatry ny adalan’ny tetezamita
Mikorontana ny kaompania ana habakabaka Air Madagascar amin’izao fotoana ary matetika no hisian’ny fanafoanana sidina.
Fizahantany Afaka mampiditra vola be ho an’i Madagasikara
Anisan`ny firenena fantatry ny mpizahatany i Madagasikara kanefa mbola vitsy no resy lahatra mankaty amintsika, indrindra tamin’ireny fisian’ny valanaretina pesta teto Madagasikara ireny. Maro be anefa ny vokatra ateraky ny fizahantany ary azo tsapain-tanana izany, indrindra ny amin’ny lafiny toekarena.
Sarimihetsika arahina adihevitra Hahafahana manabe ny tanora
Omaly talata 13 febroary 2018 no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny PLAZA Ampefiloha ilay sarimihetsika arahina adihevitra nokarakarain’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena ho an’ny mpianatry ny lycée. Fiaraha-miasa miaraka amin’ny Canal 7 Events izy ity ary atao isaky ny talata ao amin’io toerana io.
Kely sisa dia ho lany ireo tahirina bokim-pianakaviana sy taratasy fanaovana kopia mari-pahaterahana eny anivon’ireo Boriborintany enina eto an-drenivohitra.
Tovovavy Malagasy 100 amin’ny 1.000 no miteraka alohan’ny 19 taona
Ny 32 %-n’ny mponina eto amintsika dia ankizy sy tanora eo anelanelan’ny 10 ka hatramin’ny 24 taona avokoa. Ny antsasak’izy ireo mahery dia latsaky ny 20 taona avokoa, izany hoe ao anatin’ilay taona fialan’ny ankizy sakana.